Gobolka Nogob iyo Ciyaarihii Kubada Cagta Oo Kabilowday Degmada Garbo - Cakaara News
Gobolka Nogob iyo Ciyaarihii Kubada Cagta Oo Kabilowday Degmada Garbo
Garbo(cakaaranews)Sabti 1da July 2017. Waxaa si rasmi ah uga furmay degmada Garbo Ciyaarihii kubada cagta ee dhamaan degmooyinka Gobolka nogob taaso ay furitaankeedii kasooqaybgaleen masuuliyiinta ugu saraysa gobolka nogob oo uu ugu horeeyo Gudoomiyaha Gobolka Nogob mudane Axmed Aadan Axmed iyo mas'uuliyiin kale.
Hadaba, Gudoomiyaha Gobolka Nogob mudane Axmed Aadan Axmed oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in si rasmi ah ay u bilawdeen ciyaarihii kubada cagta ee dhamaan kooxaha kubada cagta ee degmooyinka gobolka Nogob islamarkaana ay maanta wada ciyaareen kooxda kubada cagta ee degmada Garbo iyo degmada Sagag iyadoo ciyaartana ay guushu ku raacday degmada Garbo oo kubadisay 1-0. wuxuuna gudoomiyuhu xusay in maalinkii shalay ahayd lagu furay ciyaarta kooxda kubada cagta ee kasocotay degmada ceelwayne ee xarunta gobolka Nogob iyo Degmada xaraareey. Halkaasoo guushu kuraacday degmada ceelwayne oo kubadisay 4-0. Sidookale galinkii hore ee maanta ayaa waxaa iyana wada ciyaaray degmada Dhuxun iyo Degmada cayuun halakaas oo ay guushu kuraacday degmada Dhuxun, kunabadisay 2-0.
dhanka kale, Gudoomiyaha ayaa xusay in ciyaaruhu ay u socdaan si quruxbadan oo nabad iyo isjacayli kudheehantahay.
Sikastaba ha ahaatee, ciyaarahan oo ah mid koob lagu kalaqaado, sanadwalbana looqabto kooxaha kubada cagta ee degmooyinka gobolka ayaa lafilayaa inay bari wada ciyaaraan 2da kooxood ee kala ah degmada cayuun iyo xaraarey.